Kedu ihe Douglas scale na ihe ọ bụ maka | Network Meteorology
Mara ebili mmiri na ọnọdụ nke oké osimiri, ndị Douglas n'ọtụtụ. N'ezie ị nụla otu puku ugboro na akụkọ mgbe anyị na-ahụ oge ha na-ezo aka n'oge oge n'oké osimiri dị ka aza, oke ifufe, oke osimiri, wdg. Okwu ndị a niile na-ezo aka na steeti oke osimiri n'oge ahụ dabere na ikuku na ike ya. A na-eji isi ihe kọwaa omume nke ebili mmiri na ụbọchị ndị na-esonụ.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mkpa na mkpa nke Douglas.
1 Mmalite nke ọnụ ọgụgụ Douglas
2 Ala nke oké osimiri na Spanish coasts
3 Ogologo elu nke Douglas
Mmalite nke ọnụ ọgụgụ Douglas
Nomenclature a nke ejiri mara ebili mmiri na ala nke oke osimiri bu onye isi ala England Henry Percy Douglas kere. Emere ọ̀tụ̀tụ̀ a na 1917 ma jiri ya rụọ ọrụ ihu igwe nke ndị agha mmiri Britain. N’oge ahụ ọ bụ ọtùtù nwere akara abụọ, nke e jiri mee atụmatụ etu oke osimiri dị n’oge ahụ na ọzọ iji kọwaa ogo ebili mmiri nke ifufe na-emetụta.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n’ime akpịrịkpa eji akacha aga ebe niile n’akụkọ gbasara ihu igwe. Ruo taa, a ka ji ya akọwa ebili mmiri na ọnọdụ nke oke osimiri na ụbọchị ndị na-abịanụ. A na-ejikarị ya na akụkọ ihu igwe telivishọn ndị bara ezigbo uru maka ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri.
Mmeri nke ịrị ugwu Douglas bụ na o nwere nnukwu ịdị mfe na ụzọ nkọwa dị oke mkpa iji kọwaa ọnọdụ ụgbọ mmiri n'oge niile. Njirimara ndị a emeela ka Douglas ghara ịdị ogologo oge na ọkachamara ọ bụla nke oké osimiri ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ nwere ike ree akụkọ gbasara ihu igwe.
Iji ghọta ogo Douglas anyi aghaghi ima ogo nke ebili mmiri. E gosipụtara ịdị elu a na koodu mbụ nke ọnụ ọgụgụ. Ọ pụtara oke mkpa ebili mmiri. Koodu mbụ a na-ezo aka n’iru ebili mmiri nke onye nwere ahụmahụ pụrụ iji anya ya hụ ebe ọ malitere. Ebe mmalite amalite ekwesịghị isi n'ụsọ osimiri. Ya na mkpokọta nke ogo nke atọ nke ebili mmiri kachasị elu.
Ala nke oké osimiri na Spanish coasts
A na-eji ọ̀tụ̀tụ̀ a mara ọnọdụ oké osimiri dị n'ụsọ mmiri anyị, n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri. Enwere ike ịmata nke a site na ịba mmiri nke dị na netwọkụ mmiri miri emi dị nso site n'ụsọ mmiri na nnukwu omimi. Ọtụtụ mgbe dị na omimi nke ihe dịka 200 mita n'ụzọ dị otú ahụ na nha ya enweghị nsogbu site na mmetụta dị iche iche dị na mpaghara nke nwere ike ịnọchite anya ụfọdụ mgbanwe n'ihi oke osimiri.
A na-ekesa netwọk niile nke ụsọ oké osimiri n'akụkụ mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri. A na-agbanye ụgbọ ndị a na omimi 100 mita. Ihe ka ọtụtụ n'ụkpụrụ buoys ndị a na-enye nsogbu site na profaịlụ nke ụsọ oké osimiri na mmetụta nke ala. Ya mere, ozi anakọtara site n'ụdị akara a bụ ozi a na-enye n'ụzọ nnọchi anya naanị n'okpuru ọnọdụ mpaghara.
Kedu otu anyi kwesiri itukwasi obi, ala nke oke osimiri nwere ikike nke ikuku. Ike nke ifufe ka etinyebere na ọkwa Beaufort. Agụta ọnụ ọgụgụ a site na 0 rue 12 nke nwere ekpemekpe aha otutu nke eji eme ihe otutu. N'ezie ị nụla ụfọdụ n'ime okwu ndị a na anyị ga-etinye n'okpuru na Beaufort:
Ogologo elu nke Douglas
Koodu nke mbu Douglas nwere bu odi elu di elu. Ka anyị nyochaa ihe ụkpụrụ ndị a bụ:
Ọkwa 0: enweghị ebili mmiri. Enwere ike ịhụ ala nke oke osimiri ahụ na elu ya dị ka enyo. Enweghị ebili mmiri
Ọkwa 1: mmiri gbara agba. Oké osimiri malitere ịgbanwe n'akụkụ ụfọdụ. Ebili mmiri ahụ ruru sentimita 10 n’ibu.
Ọkwa 2: marejadilla. A na-akpụ ebili mmiri ka dị mkpụmkpụ ma dịkwa mma akara. Ha na-amalite itaba n'ime obere ahihia nwere ụfụfụ nke na-achachaghị ọcha mana ọ na-enyo enyo. Ebili mmiri ahụ nwere ike iru 50 centimeters.
Ọkwa 3: oke ifufe. Ọ bụ otu nke steeti oké osimiri nwere ike hụrụ otú ogologo bọọlụ na-guzobere ọma ji mara ọcha ụfụfụ ridges. Ọ bụ ebe a ka akọwapụtara oke ifufe oké osimiri wee dị iche na oke osimiri nwere ike ịdị. Mgbe ebili mmiri ahụ dapụrụ, ntamu na-akwụsị ngwa ngwa. Ebili mmiri ahụ ruru otu mita 1.25.
Ọkwa 4: ike zaa. Ogologo ọdụ na-etolite na ụfụfụ ụfụfụ niile. Oké osimiri na-eti mkpu mgbe niile. N’ebe a ebili mmiri nwere ike iru nha mita 2.5.
Grado 5: oké. Oke ebili mmiri dị elu na-amalite ịmalite na mpaghara nke ụfụfụ ọcha na-ekpuchi nnukwu ebe. Mgbe ebili mmiri mebiri, ha na-eme mkpọtụ na-ada ụda dị ka ịtụsasị ihe. N’ebe a ka ebili mmiri ruru ogo nke 4.
Ọkwa 6: dị oke oke. Oké osimiri na-ewe iwe kpamkpam na ụfụfụ na-acha ọcha na-etolite oghere nke ebili mmiri wee malite ịhazi onwe ha n'ìgwè n'ikuku. N’ebe a ebili mmiri ruru ogo nke isii.
Ọkwa 7: osisi. N'ebe a ka ebili mmiri na ebili mmiri ha na-abawanye. A na-ahazi ụfụfụ ahụ na warara ndị agha na ikuku ikuku. N’ebe a ebili mmiri ruru oke nke mita 9.
Ọkwa 8: ugwu. Lee ebili mmiri dị elu. A na-eji ụfụfụ kpuchie ebe buru ibu. N’ebe a ebili mmiri nwere ike iru oke mita 14.
Ọkwa 9: nnukwu. Ebili mmiri na-ebuli elu nke na mgbe ụfọdụ ụgbọ mmiri ahụ ga-apụ n'anya n'anya gị. Oké osimiri ahụ kpuchie na ụfụfụ ọcha na-acha ọcha n'usoro n'ìgwè na ntụziaka nke ifufe. N’ebe a ka ebili mmiri rutere nha karịrị mita iri na anọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ịrịgo Douglas.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Douglas n'ọtụtụ
Ikekwe, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji na-agụ nke abụọ na-achọ mmejọ na ihe nke ahịrịokwu, ma ọ bụ, Mark, na, ọcha…. . Site mgbe ahụ gawa, akwụsịrị m ịgụ.
Isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị na m masịrị ya, mana ...
Zaghachi Jose A. Durán